संविधान सभा 'हत्या'को साक्षी बनेको दिन
अहो, त्यो जेठ १४ ! संविधान सभा 'हत्या'को साक्षी बनेको दिन !! त्यसपछि धेरै घटना भए। त्यसैले समय धेरै बितिसके जस्तै लाग्छ। तर क्यालेन्डरले भर्खर एक चक्र मात्रै लगाएको हो। वर्ष दिनमा नै सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएर प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सरकार आइसकेको छ। देशमा मात्र हैन, हाम्रै समाचार कक्षमा पनि सम्पादकीय नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ। त्यतिबेला निरन्तर समाचार अपडेट गराउने केही साथीहरु यतिबेला अर्कै मिडिया हाउस पुगिसकेका छन्। तर पनि धेरै कुरा अझै उस्तै छन्। निर्वाचन मिति अझै घोषणा हुन सकेको छैन। बेथिति उस्तै छ। नेतृत्वप्रतिको घृणा अझै चुलिएको छ।
सन् २००४ देखि अनलाइन पत्रकारितामा सक्रिय उमेश नागरिकन्युजको स्थापना कालदेखि आवद्ध छन्।
वर्षाले बिथोल्यो बर्मुडामा नेपालको तयारी
समाचारहरुसँग खेलिरहने भएकोले समाचारका विषयसँग खासै भावना जोडिएको हुन्न। तर जेठ १४ मध्यरातमा संविधानै जारी नभई संविधान सभा भंग भइसकेपछि अफिसको गाडीमा घर फर्कँदै गर्दा लागेको थियो- सबै ध्वस्त भयो। यत्रो दुःख गरेर पाएको उपलब्धि सबै गुम्ने भयो। देशको कहालिलाग्दो भविष्य सम्झेर अत्यास लागेको थियो। एकाबिहानैदेखि राति अबेरसम्म नागरिकन्युजमा निरन्तर अपडेट गर्दाको थकाइले हैन, अब के होला भन्ने चिन्ताले फतक्कै गलेको थिएँ।
जेठ १४ को दिन बिहान निद्रा खुल्ने बित्तिकै थाहा थियो, प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको फैसलापछि संविधान घोषणा गर्न आज मध्यरातसम्मको समय छ- २४ घण्टाभन्दा पनि कम। ताजा समाचार पाउन नागरिकन्युजमा थाम्नै नसक्ने गरी पाठकहरुको ओइरो लागेको थियो। प्राविधिक साथीहरुलाई 'अलर्ट' गराउँदै थिएँ। बिहानैदेखि दलहरुको बैठक जारी थियो। आज राति अबेरसम्म बस्नुपर्छ भनेर मानसिक रुपमा नै हामी तयार थियौँ।
घटनाक्रम यति तीव्र रुपमा विकसित हुँदै थियो कि लाइभ अपडेटको विकल्प थिएन। दिउँसो एक बजेतिर लाइभ अपडेट चालु गर्‍यौँ। ऋषिकेश दाहाल रेगुलर अपडेटमा थिए। कृष्ण ढुंगाना र म लाइभ अपडेटमा थियौँ। प्रधानमन्त्री निवास र त्यहाँ भइरहेका वार्ताहरुको मोर्चामा उजिर मगर डटेका थिए। संविधान सभा भवनभित्र र संसद सचिवालयमा भइरहेका वार्ताहरुको अपडेट माधव ढुङ्गेलले गराइरहेका थिए। मदन चौधरी संविधान सभा वरपरको मोर्चा सम्हालिरहेको थियो, जहाँ विभिन्न जातीय संघसंस्थाहरुको निरन्तर प्रदर्शन जारी थियो। केपी ढुंगाना सुरक्षाको विषयमा अपडेट गराउँदै थिए। गोविन्द परियार कांग्रेस बैठकको न्युज टिपाउँदै थिए। फोटो पत्रकार विकास कार्कीसमेत संसद भवनमा भएका नाराबाजीको समाचार टिपाउँदै थिए।
समाचार अपडेट गराउने क्रममा बीचमा केही समय संविधान बन्ला नै जस्तो लागेको थियो हामीलाई। विशेष गरी जनजाति सभासदहरुको ककसको दलहरुसँगको वार्तापछि र मधेसी सभासदहरुलाई गरिएको ब्रिफिङपछि संविधान बन्ने आशा पलाएको थियो। १० प्रदेश र एक केन्द्र शासित प्रदेशमा सहमति हुन लागेको खबर आएका थिए।
हजारौँ पाठक लाइभ अपडेटमा झुम्मिएका थिए। दिउँसो ३ बजेतिर तपाईँको विचारमा आजै संविधान बन्ला भन्ने प्रश्न राख्दा ४६ प्रतिशतले बन्छ भनेका थिए।
तर सात बज्दानबज्दै माधव ढुङ्गेलले केपी ओलीको भनाई फोनमा टिपाए- अब संविधान नबन्ने भयो, विकल्पमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्दैछौँ।
कर्फ्यु लाग्ने हल्ला व्याप्त थियो। स्कूलहरु त बन्दै गरिएका थिए। जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले कर्फ्यु हैन, ५ बजेपछि मदिरा किन्न, बेच्न र पिउन नपाउने सूचना जारी गर्‍यो।
संविधान नबन्ने भयो भन्ने सात बजेको आसपासमा नै प्रष्ट भइसके पनि आउँदो दिनमा के हुनेछ भन्ने थाहा पाउन चाहिँ मध्यरातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईकै सम्बोधन आवश्यक भयो। उनले संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोकेछन्, जसको विरोध कांग्रेस-एमालेले गरे। अन्ततः त्यतिबेलादेखिको असहमति भट्टराईको बहिर्गमनपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बन्दा बल्ल हट्यो। तर यही सरकारले पनि आज यी शब्द लेख्दासम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री भट्टराईको सम्बोधनपछि हामी न्युजरुममा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आउने वक्तव्यको प्रतीक्षामा थियौँ। तर त्यो रात वक्तव्य आएन। के होला भन्ने अन्यौलका बीच नै हामी राति २ बजेतिर कार्यालयबाट घरतिर लागेका थियौँ।
हेर्नुस्, त्यो दिनको लाइभ अपडेट-
नमस्ते, संविधान जारी गर्ने निधार्रित समय केही घण्टा मात्र बाँकी रहँदा खबर प्रत्येक निमेषको दिन हामी उपस्थित भएका छौँ।
well ! this is very sincere journalism work of nagarik news group thanks so much.
तपाईँको विचारमा आजै संविधान बन्ला?
अझै भन्न सकिन्न
संविधान सभा नियमावलीमा यस्तो छ-
पारित संविधानको प्रमाणिकरण प्रति तयार गरी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गर्ने,
अध्यक्षले प्रमाणिकरण गर्ने र संविधानसभाले औपचारिक राष्ट्रिय समारोहको आयोजना गरी अध्यक्षले पारित संविधान राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने
र राष्ट्रपतिले सोही समारोहबाट नेपाली जनता समक्ष संविधान सार्वजनिक गरी संविधान लागू भएको घोषणा गर्ने प्रावधान छ। अन्तिम अवस्थामा सहमति भए संविधान जारी गर्न अब नियमावलीका केही धारा संशोधन गर्नुपर्नेछ।
संविधानसभा परिसरमा पक्ष र विपक्षको धर्ना
संविधान जारी गर्ने समय केही घन्टामात्रै बाँकी रहँदा संविधानसभा भवन परिसरमा भने जातीयताका विषयमा पक्ष र विपक्षमा आवाज उठाउनेहरुको सहभागिता वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दल र सङ्घसंस्थाले संविधानसभा भवन घेराउ गर्दैगर्दा राष्ट्रिय अखण्डता र जातीय सद्भाव संयुक्त सङ्घर्ष समितिले कुनैपनि हालतमा मुलुकलाई जातीयताका आधारमा सङ्घीयता लाद्न नहुने भन्दै प्रदर्शन गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आजै राजीनामा देलान्?
नेप्से उकालो लाग्यो, १० करोड ७३ लाखको कारोबार
राजनीतिक सहमति जुटने विश्वासमा आज सेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अंकले बढेको छ। नेप्से १४ अंकले बढेर ४ सय १२ मा पुग्यो। खरिद कर्ता बढेपछि नेप्से बढेको हो। चार प्रतिशतले बजार बढेपछि सर्किट ब्रेकर लागेर आधा घन्टा कारोवार पनि रोकियो। 'सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि दलहरुले अन्तिम समयमा सहमति गरि संविधान जारी गर्छन भन्ने विश्वास साधारण लगानीकर्तामा देखिएकोले बजार बढेको हो' स्टक ब्रोकर एशोसियशनका अध्यक्ष अन्जनराज पौडेलले नागरिकन्युजसँग भने। एकै दिन सेयर बजारमा १० करोड ७३ लाखको सेयर किनवेच भएको छ। बढ्दो सेयर कारोवारले पनि बजार उकालो तर्फ लाग्ने देखाएको छ।
वार्ताको नाउँमा समय बिताउँदै शीर्ष नेताहरुः गगन थापा
राजनीतिक सहमतिका लागि सिंहदरबारमा भइरहेको वार्ताबाट बाहिरिएका कांग्रेस सभासद गगन थापाले माओवादीले संविधानसभाको आयु रहेसम्म वार्ता लम्ब्याउने र कुनै निष्कर्षमा नपुग्ने खेल खेलिरहेको आरोप लगाएका छन्। 'भर्खरै प्रधानमन्त्रीले १० प्रदेशको प्रस्ताव गर्नु भएको छ। यो समय कटाउन चालिएको चाल मात्रै हो', गगनलाई उदृत गर्दै वार्तास्थलबाट नागरिकन्युजकर्मी माधव ढुङ्गेलले जनाएका छन्।
संविधानमा संकटकाल बारे के छ ?
धारा १४३. सकटकालीन अधिकार : (१) नपाल राज्यको सार्वभौ मसत्ता, अखण्डता वा कुनै भागको
सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह वा चरम आर्थिक विश्र ङृ खलताका कारणले
गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएमा नपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षत्रमा लागू हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्नसक्ने छ।